The Beats Fit Pro ga-amalite na Europe na Canada na Jenụwarị 24 | esi m na mac
Beats Fit Pro ga-amalite na Europe na Canada na Jenụwarị 24
N'otu ọnwa a, enwetara ọbịbịa nke ekweisi Beats Fit Pro na kọntinent ochie na Canada mgbe mmalite ya na United States. Ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-ahụ maka ibipụta akụkọ ahụ na-akwado mmalite mmalite nke ekweisi ntị ndị a dị nso, niile na akaụntụ Twitter gọọmentị mgbe nzaghachi nye onye ọrụ.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị ọchịchị ụbọchị akwadoro dị ka ndị dị otú ahụ, ma Ọtụtụ mgbasa ozi na-arụtụ aka dị ka ụbọchị gọọmentị na-esote Mọnde, Jenụwarị 24. The Beats Fit Pro bụ Beats kacha ọhụrụ sitere na Apple, ha na-agbakwunye ụdị nku na-agbanwe agbanwe iji debe ha na ntị, ihe nchaji, ihe mkpuchi silicone, kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ, ụda oghere na isi ike na mgbawa mgbawa. H1 na-enye " Hey Siri" nkwado.
The ukara tweet nke ha gosipụtara ọbịbịa nke Beats ọhụrụ a dị nso:
Ⓘ Ihe ọhụrụ na-abịa.
- Mgbatu Site Dre UK (@beatsbydreUK) January 10, 2022
Na mgbakwunye na ụbọchị mwepụta enwere ike maka Jenụwarị 24 na Europe na Canada, a na-atụ anya na maka Ndị ọrụ Japan mwepụta ahụ rutere na 28th nke otu ọnwa ahụ. Igwe ekweisi ndị a dị n'ime ntị dị na agba anọ: pink, isi awọ, ọcha na ojii. Ọ ga-adị mkpa ịhụ ma amụma nke mgbasa ozi ndị a mezuru ma ọ bụ na ọ bụghị ma hụ na mba ole ha dị na Monday na-esote 24th, anyị na-atụ anya na nke anyị bụ otu n'ime ha. Ozi niile dị na ekweisi Beats ndị a dị na webụsaịtị Apple yana na Beats ukara page.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ngwa » Beats Fit Pro ga-amalite na Europe na Canada na Jenụwarị 24
Apple weputara ndọtị Shazam maka Chrome na Microsoft Edge
Dị ka Kuo si kwuo, ugogbe anya Virtual Reality ga-eji otu chaja dị ka 14 "MacBook Pro